लकडाउनले मनवीरको परिवारलाई ओडारमा पु¥यायो, छोरा छोरीको पढ्ने सपना अधुरै – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लकडाउनले मनवीरको परिवारलाई ओडारमा पु¥यायो, छोरा छोरीको पढ्ने सपना अधुरै
लकडाउनले मनवीरको परिवारलाई ओडारमा पु¥यायो, छोरा छोरीको पढ्ने सपना अधुरै
HOMEलकडाउनले मनवीरको परिवारलाई ओडारमा पु¥यायो, छोरा छोरीको पढ्ने सपना अधुरै
By user 1 hour ago
The Show of CoverMe in Number 1 in Israel
She Was The Most Beautiful Girl In The World. Look At Her No…
Complete League of Angels Review
काठमाडौ । गरिबीले गर्दा तनहुँको एक परिवार ओडारमा बस्न बाध्य भएको छ । ओडारमा बस्ने परिवारमा मनवीर गुरुङ, निजको श्रीमती उदाशिया, छोरो २० वर्षीय गणेश र १३ वर्षीया छोरी पूजा रहेका छन् । लामो समय लकडाउन हुँदा ज्याला मजदूरी गर्न नपाएको र कोठा भाडा तिर्न नसकेपछि कोठा छाडेर ओढारमा बास बस्नुपरेको उहाँहरु बताउनुहुन्छ । मनवीरको परिवार व्यास नगरपालिका–२ अमरापुरीस्थित बुल्दीखोला किनारमा रहेको ओडारमा गत बिहीबारदेखि बस्दै आएका छ । कोभिडले भएको पटक÷पटकको बन्दले काम गर्न नपाएपछि समस्या परेको मनवीरले बताउनुभयो ।
आम्दानी नभएकाले लामो समयदेखि भाडा तिर्न नसक्दा कोठा छाड्न बाध्य भएको उहाँले आफ्नो पी डा व्यक्त गर्नुभयो । चार जनाको परिवारमध्ये एक जना शारीरिक अपाङ्गतासमेत रहेकाले उनीहरुलाई बिहान बेलुकाको छाँक टार्न थप समस्या परेको पुल्चोक टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष कर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक विपन्नताले उदाशिया गुरुङका परिवार गुफामा आएर बस्न बाध्य भएका हुन् ।
स्थानीयवासीले दिएको अन्नको भरमा उनीहरुको जीवन चलिरहेको उदाशिया बताउनुहुन्छ । ओडारमा बसेका परिवारलाई उद्धार गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । “जङ्गली जीवन बिताउँदै आएका कुसुण्डा, राउटेले जङ्गल छाडिसके तर उनीहरु ओडारमा बसेपछि हामीलाई नरमाइलो लागिरहेको छ”, पुल्चोक निवासी डा एचबी क्षेत्रीले भन्नुभयो, “उद्धारको लागि सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ ।”
गरिबीले गर्दा छोरीको पढाइ पनि अवरुद्ध भएको सोही ठाउँ निवासी राधा बस्न्यातले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूजा कक्षा ६ मा पढ्थिन्, उनीमा पढ्ने रहर थियो तर कापी र कलम किन्ने पैसा नभएकाले पढाइ अधुरो भएको छ ।” शारीरिकरुपमा अशक्त भएकाले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । गणेशको नागरिकता बनाएर अपाङ्गता परिचयपत्र दिलाउने प्रयास भइरहेको टोल विकास संस्थाले जनाएको छ ।
यूएईले सात मेट्रिक टन स्वास्थ्य सामग्री नेपाल पठायो
लाखौलाई ठगेको युनिटी लाइफका प्रमुख सञ्चालक विष्णु क्षेत्रीको मृत्यु
रुपन्देहीमा भएको भयानक कार दुर्घटना ! सबार सबैको ज्यान गयो